Rastrabani.com | प्रदेशमा पूर्वाधार नबन्ने, किन ? - Rastrabani.com प्रदेशमा पूर्वाधार नबन्ने, किन ? - Rastrabani.com
प्रदेशमा पूर्वाधार नबन्ने, किन ?
काठमाडौं । संघीयता खर्च व्यवस्थापन चुनौती बन्दै गएपछि प्रदेश राजधानीमा नयाँ निर्माणको काम तत्काल नगरिने भएको छ।
हाल रहेका सरकारी संरचनामा प्रदेश सरकारको कार्यालय व्यवस्थापन गर्ने सोच अर्थ मन्त्रालयको छ। अर्थसचिव शंकरप्रसाद अधिकारीले प्रदेश राजधानीका लागि क्षेत्रीय, अञ्चल र जिल्ला कार्यालयका पूर्वाधार प्रयोगमा ल्याइने बताए।
उनले भने, ‘यस्ता कार्यालय अहिले सबै ठाउँमा छन्। तिनीहरूलाई मर्मत मात्र गर्ने हो। नयाँ कार्यालय निर्माण गरी राजधानी राख्ने होइन।’
स्थानीय निकायका ६ हजार सात सय वडा तथा कतिपय गाउँपालिकाको कार्यालय बनाउनुपर्ने भएकाले अबको तीन वर्षसम्म प्रदेश राजधानी मर्मतसम्भारकै भरबाट चलाइने छ।
प्रदेशका लागि आवश्यक गाडी पनि अहिले स्थानीय तह, मन्त्रालय, विभाग र क्षेत्रीय कार्यालयका जगेडा गाडी प्रयोगमा ल्याउने सोच पनि अर्थको छ।
प्रदेश सरकारका मन्त्रालय साना र छरिता बनाउन थोरै कर्मचारी परिचालनको तयारी गरिएको छ। यसो गर्दा खर्च व्यवस्थापन सहज हुनेछ।
राजस्व बाँडफाँट गर्दा अहिले केन्द्र सरकारले उठाएको राजस्व प्रदेश र स्थानीय निकायमा बाँडफाँट हुनेछ। बाँडफाँट गर्दा केन्द्र सरकारले संकलन गर्दै आएको राजस्वमध्येबाट एक खर्ब ६८ अर्ब राजस्व प्रदेश र स्थानीय निकायमा जानेछ। मूल्यअभिवृद्धि कर र स्थानीय उत्पादनको अन्तःशुल्क २५र२५ प्रतिशतका दरले स्थानीय निकायले पाउनेछन्।
– ६ हजार सात सय वडारगाउँपालिका भवन बनाउन आवश्यक
– पूर्वाधारमा ८०र२० अनुपातमा खर्च गर्ने
– केन्द्रबाट संकलित राजस्वमध्ये एक खर्ब ६८ अर्ब प्रदेश र तहमा जाने । अाजकाे अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर छ ।